Inona no tokony hotadidinao rehefa manangana rindran-kira mahazatra ho an'ny SEO ambony?
Tsy ilaina ny milaza fa manangana backlinks mahitsy ho an'ny SEO ny lala-mahitsy dia misy zavatra miafina tadidin'ny mpitsidika rehetra sy ny tompon'ilay tranonkala. Marina izany, indrindra satria ny dingana manontolo amin'ny famoronana rindran-drakitra manan-danja izay tsy handratra ny lalao dia manana dingana marobe sy andaniny. Ary matetika loatra ny fialana amin'ny zava-manahirana dia hita fa sarotra kokoa noho ny ankamaroantsika mety hieritreritra - fidelity appraisals. Izany no mahatonga ahy etsy ambany hampiseho aminao ny sasany amin'ireo fandrika matetika mikasika ny fananganana rohy mahazatra. Fantaro izay tokony hialana amin'ny vidiny rehetra - na farafaharatsiny voafetra haingana dia haingana amin'ny fahitanao azy ireo ao amin'ny tranokalanao na bilaogy. Midika izany fa ny iray amin'ireo fahadisoana manaraka ireo dia mety hanodikodina mora foana ny lalam-piidinanao mahazatra ao anaty ampahany tsy misy ilana azy - saika tsy misy fotoana. Ny tena zava-dehibe - raha mahakasika ny teboka indrindra, ny rohy tokana "toxic" dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahombiazan'ny SEO mandritra ny fotoana maharitra.
Tsara kokoa raha mahita fijery kely fohy eto ianao. Aza misavoana ireo fahadisoana miavaka ireo - manontania tena hoe raha manana ny zava-drehetra ianao, ary ny tranokalanao na ny bilaoginao dia tsy hikorontana mihitsy:
tranonkala na bilaogy misy laza ratsy (tsy lazaina intsony ireo efa voarara ao amin'ny fanondroana Google);
loharanom-pitaovana tsy manam-paharoa, na toerana misy fifandraisana amin'ireo orinasa spammy indrindra, toy ny fijangajangana, filokana, na pharmacy;
loharanom-baovaon'ny lohamilina sahala amin'ny tranokalan'ny tranokala, bilaogy, na forums saingy manana rindran-damosina toa mahitsy ao amin'ny rohiny manokana, na manolotra azy ireo ho an'ny varotra sy / na fifanakalozana.
Ny zava-drehetra dia tokony hohazavain'ny tenany manokana, satria ny fampiharana ireo safidy voatanisa voamarikao dia mety hahatonga anao hanimba ny fikarohana misy anao amin'izao fotoana izao, fa tsy ny fanatsarana ny fanatsarana ny paikadinao SEO amin'ny ambaratonga. Raha vantany vao vita ny zava-misy mazava, mazava ho azy, etsy ambany, dia hanondro ny roa mety ho tena mampidi-doza aho nefa mbola tsy miraharaha loatra ny hadisoana. Raha ny momba ny fananganana antontan-taratasy mahazatra, dia matetika no mamono ilay lalao:
ary aza mampiasa azy ireo amin'ny fomba fitifirana miverimberina. Amporisihiko mafy ny miresaka lalindalina kokoa amin'ny lohahevitra, satria mpikirakira ara-barotra matanjaka izay mibaribary dia afaka mampitombo ny fivoaranao. Ny fahamarinana mahatsikaiky dia ny hoe diso na diso mihitsy ny vatofantsika fanindroany dia afaka mamadika anao tsara sy mahitsy amin'ny backlinks amin'ny antony tena fisian'ny filaharana, na ny sazy tanana mihitsy aza.
Ny fampiasana tsy mety ataon'ny DoFollow / NoFollow Attributes
Fandalinana lalindalina kokoa. Mazava ho azy, ny Dol-Backlinks ihany no afaka mahafeno ny filan'ny SEO amin'ny ambaratonga. Amin'izany fotoana izany - raha toa ianao ka manipuler na kely vetivety miaraka amin'izy ireo - ny zava-drehetra dia mety hiafara amin'ny vokatra goavana toy izany.
Andao hiatrika izany - na dia manana fandresena tsara aza ianao amin'ny fahitana loharano tsara sy azo antoka tokony hanorina Raha mila rohy ianao dia tsy tokony hivezivezy ianao - mba hampiasana ireo fahafahana vaovao rehetra ao anatin'ny ora maromaro na mandritra ny alina. Ary ny fampitomboana mafy - na amin'ny kalitao na ny habetsaky ny rohy - dia tsy ny zavatra tokony hoderaina. Tsarovy, manangana rohy mifandraika izay hanompo anao amin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny SEO - dia momba ny fandanjana. Aza misalasala manontany tena indray hoe: Mijery tsara ve ny zava-drehetra? Efa nandany fotoana ampy haka ireo loharano marina ve ianao? Azonao antoka ve fa ny zavatra rehetra momba ny backlinks dia efa eo ary tsy natao afa-tsy ho amin'ny tanjona mazava?